Global Voices teny Malagasy » Maninona ireo bilaogera no loza mitatao ho an’ny governemanta etiopiàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Mey 2019 7:17 GMT 1	 · Mpanoratra Guest Contributor Nandika (fr) i Rémi, imanoela fifaliana
Sokajy: Etiopia, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Avy amin'i Beza Tesfaye. Tao amin'ny tranonkala Africa is a Country  no nivoaka voalohany ity lahatsoratra ity. 
Tafiditra anatin'ny fironana mampiahiahy misy ao Etiopia ireny fisamborana ireny, firenana iray voasokajy matetika ho mpanitsakitsaka ny fahalalahana raha vao fahalalahan'ny asa fanaovana gazety no resahana. Araka ny lazain'ny Kaomity Mpiaro ny Mpanao Gazety, Etiopia no firenena iray ahitàna mpanao gazety betsaka indrindra mandositra ny fireneny  [rohy amin'ny teny anglisy]. Ho an'ireo misafidy mijanona kosa, zavatra tsy maintsy iomànana ny mety ho henjehina noho ny resaka fampihorohoroana rehefa manakiana ny governemanta izy ireo. Tamin'ny 2009, rehefa noresahana ny Fanambaràna ny ady amin'ny asa fampihorohoroana, izay sady midadasika no manjavozavo ihany koa, nanaitra toy izao ny Human Rights Watch  :
Ny farany tamin'ireo niharan'io politika famoretana io dia toa tanora enina mpikatroka, mpikambana anaty vondron'ireo bilaogera, antsoina hoe Zone 9 , sy telo mpanao gazety koa. Toy ny maneso ilay daty nisamborana azy ireo izay nifanandrify tamin'ny fitsidihan'ny Sekreteram-panjakàna amerikàna, John Kerry, izay naneho ny ahiahiny momba ilay vondrona nandritra ny fifampiresahana tamin'ny mpanao gazety . Nisy hetsipanehoana hatezerana nihanaka haingana dia haingana tety anaty tambajotra sosialy; na Facebook io, na Twitter ary hatrany anatin'ny tranonkala tumblr  aza. Ao amin'ny bilaogy Zone 9, mbola azo vakiana ao ny teny filamatr'ireo mpanoratra ao aminy : “Mibilaogy izahay satria mahatsapa ho manana adidy”.
Tamin'ny 2012, nanoratra lahatsoratra iray i Tesfalem, nomeny lohateny hoe :”Rehefa lazaina fa asa fampihorohoroana ny asa fanangonambaovao” . Soritany ao anatiny ny fiantraika manangoly entin'ilay lalàna miady amin'ny asa fampihorohoroana ho an'ny asa fanaovana gazety ao Etiopia:
Ho ahy dia mampikorontan-tsaina ny hoe governemanta iray mieboebo amin'ny fanànana fandaharanasam-piarovana iray feno sy be pitsopitsony ao Afrika atsimon'i Sahara  no mandray ny vondrona bilaogera iray sy mpanao gazety ho toy ny loza mitatao. Raha efa nihanaka be ny fampiasàna tambajotra sosialy, toy ireo any amin'ny firenena nitrangan'ny Lohataona Arabo, na raha efa mora koa ny fahafahana nahazo ireo gazety tsy miankina any amin'ireo faritra tsy mbola tafiditra ho tanandehibe, dia izay no tokony hisy zavatra ilàna fieritreretana. Fa anaty firenena iray izay 1,5%  monja amin'ny vahoaka no mampiasa aterineto ary 61%  amin'ny vahoaka tonga taona no tsy mahay mamaky teny sy manoratra, dia tena sarotra ho an'ireny mpanoratra ireny ny hieritreritra fomba iray hanakorontanana ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/22/138054/
 mpanao gazety betsaka indrindra mandositra ny fireneny: http://www.cpj.org/blog/2012/01/standing-with-ethiopias-tenacious-blogger-eskinder.php
 fifampiresahana tamin'ny mpanao gazety: https://www.youtube.com/watch?v=XFWAFm15Ag0&feature=youtube_gdata_player
 tranonkala tumblr: http://zoneniner.tumblr.com/
 Rehefa lazaina fa asa fampihorohoroana ny asa fanangonambaovao”: http://afroaddis.wordpress.com/2012/02/06/ethiopia-when-reporting-becomes-terrorism/
 fandaharanasam-piarovana iray feno sy be pitsopitsony ao Afrika atsimon'i Sahara: http://www.politico.com/magazine/story/2014/05/an-unholy-alliance-in-east-africa-106323_Page2.html#.U2mBD-A8pFk